Semalt भिन्नता: Google को र शीर्षको पर
मार्केटिंग एजेन्सीहरूलाई छुट्ट्याउन यो गाह्रो हुन सक्छ।
जस्तो देखिन्छ, तिनीहरू आफै मार्केटिंगमा राम्रा छन्। जब ती सबै एउटै आश्चर्यजनक दावीहरू गरिरहेका छन् - अधिक आँखाको अगाडि तपाईंको व्यवसाय पाउनुहोस्, तपाईंको बिक्री टर्बोचार्ज गर्नुहोस्, तपाईंको ग्राहक आधार संलग्न गर्नुहोस् - कुन कुन प्रयोग गर्ने, र कुन बेवास्ता गर्ने बारे तपाईंलाई कसरी थाहा छ?
गहुँलाई भूसबाट कसरी अलग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न, हामी पूर्ण स्ट्याक एजेन्सीलाई हेरौं जसले कामहरू सही गरिरहेका छन्: Semalt।
Semalt एक एसईओ र मार्केटिंग सेवा २०१ in मा स्थापना भएको हो। कम्पनी एक पूर्ण-स्ट्याक एजेन्सी हो, यसको मतलब यसले पूर्ण विपणन अभियान सुरु गर्नदेखि समाप्त गर्नका लागि प्रदान गर्न सक्दछ। यसको एसईओ र एनालिटिक्सको क्षेत्रहरूमा विशेष प्रतिभा छ, जहाँ यसले अनौंठो सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
स्थापना भएको वर्षहरूमा, Semalt एक ग्लोबल मार्केटिंग बलमा बढेको छ। लगभग १. million मिलियन साइटहरूको विश्लेषण गरेर र ,000००,००० प्रयोगकर्ताहरूसँग घमण्ड गर्दै, Semalt चाँडै नै एसईओ र मार्केटिंग अन्तरिक्षमा एक नेता बन्न पुगेको छ र ढिलो भएको कुनै संकेत देखाइरहेको छैन। एजेन्सी रचनात्मक र विशेषज्ञहरूको एक प्रतिभाशाली टीम द्वारा संचालित हो, जो तपाईं यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ!
"तपाईं सबै ठीक र राम्रो हुनुहुन्छ," तपाईं भन्नुहोला, "तर म कसरी जान्दछु कि Semalt मेरो समय र पैसाको लायक छ?" यस प्रश्नको उत्तर दिन हामीले यसको सेवाहरू नजिकबाट हेर्नु पर्छ।
एजेन्सीले एसईओ सेवाहरूको सर्तमा के प्रस्ताव गर्दछ? तपाईं कुनै पनि मार्केटिंग कम्पनीबाट तत्काल सावधान हुनुपर्दछ जसले विश्वलाई आश्वासन दिन्छ, वा उनीहरूको एसईओ सेवाहरूले कसरी काम गर्दछन् भन्ने बारे अस्पष्ट छ, किनकि यो संकेत हो कि उनीहरूले त कम उत्पादन गर्दछ वा ती प्रणालीलाई छिटो तर छोटो-परिणाम परिणामहरू प्रदान गर्न ठगी गरिरहेका छन्। ।
Semalt को मामला मा, कम्पनी तीन अलग एसईओ सेवाहरु प्रदान गर्दछ: AutoSEO, FullSEO र E- वाणिज्य SEO, र प्रत्येक को भित्री कार्य को बारे मा विस्तार मा जान्छ।
SEO को संसारमा आफ्नो औंला डुबाउन खोज्ने जो कोहीको लागि उपयुक्त, AutoSEO ले व्यवसाय मालिकहरूलाई खोज इञ्जिन अनुकूलनको लागि छिटो, सरल र प्रभावकारी परिचय प्रदान गर्दछ। यो:
तपाईंको वेबसाइटको विश्लेषण गर्दछ
मुद्दाहरूको पहिचान गर्दछ
फिक्सहरू सुझाव गर्दछ
नियमित रिपोर्ट दिन्छ
र यसले थोरै $ ०.99 for को लागि गर्छ!
ती मानिसहरु जो वास्तविक र दिगो परिणामहरू हेर्न चाहान्छन्, केहि पनि मानव स्पर्शको साथ तुलना गर्दैन, र यो कुरा वास्तवमा Semalt को फुलसेओ प्याकेजले प्रस्ताव गर्दछ। गहन विश्लेषण, अप्टिमाइजेसन र एक विशेषज्ञ टोलीबाट समर्थन पाउनुहोस् जसले १77 विभिन्न देशहरूमा वेबसाइट ट्राफिक बढायो। यदि तपाईं वास्तविक खोज ईन्जिन सफलता चाहनुहुन्छ भने, तपाईं FullSEO चाहनुहुन्छ।
ई-वाणिज्य वेबसाइटहरु सक्रिय अनलाइन बेच्दैन कि वेबसाइटहरु लाई एक बिभिन्न चुनौती प्रदान गर्दछ। Semalt को E- वाणिज्य एसईओ प्रस्ताव तपाईको विशिष्ट स्थान मा लेनदेन प्रश्नहरु र कम आवृत्ति खोजशब्दहरु लक्षित गरेर, इन्टरनेट मा सामान र सेवाहरु बेच्ने द्वारा राखिएको अनौंठो प्रश्नहरु ह्याण्डल गर्न को लागी निर्मित छ, यसैले तपाईले खोजिरहनु भएको विशिष्ट ग्राहकहरु लाई खोज्न।
Semalt र एनालिटिक्स
ज्ञान शक्ति हो। तपाईं केवल आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई हराउन र मार्केट नेतृत्व गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू र बजारलाई बुझ्नुहुन्छ भने। पूर्ण स्ट्याक एजेन्सीले एक विस्तृत विश्लेषण सेवा प्रस्ताव गर्नुपर्दछ जुन तपाईंको कम्पनीलाई सबै जानकारीहरू प्रदान गर्दछ जुन यसलाई सफल हुन आवश्यक पर्दछ।
Semalt एनालिटिक्सले तपाईंलाई तपाईंको बजार स्थितिको पूर्ण तस्वीर निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। यो:
कसरी तपाइँ र तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू प्रदर्शन गर्दै छन्
हाइलाइटहरू बजार प्रवृत्तिहरू जसले तपाईंलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ
अंतर्दृष्टि उत्पन्न गर्दछ जसले तपाईंलाई नयाँ बजारहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
यसले जानकारीको एक प्लेटफर्म बनाउँदछ जहाँबाट तपाईं एक पूर्ण व्यापार रणनीति सुरू गर्न सक्नुहुन्छ।
वैधताको लागि खोजी गर्दै
तपाईंले मार्केटिंग एजेन्सीको इतिहास प्रमाणित गरेपछि, निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू पूर्ण-स्ट्याक छन्, र जाँच गरे कि उनीहरूले नवीन, गुणस्तरीय, प्रमाणित सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन अग्रणी कम्पनीले गर्नुपर्दछ, यो भीडमा लैजाने समय हो। तपाईंको सम्भावित मार्केटिंग पार्टनरको गुणवत्ता जाँच्न यो भन्दा राम्रो तरिका अरू छैन जसले पहिले उनीहरूसँग डिल गरेका छन।
केस स्टडीहरू एक एजेन्सीले कसरी काम गर्छ भन्ने ठ्याक्कै जाँच्न उत्तम तरिका हो, र यदि तपाइँ तिनीहरूको सेवाहरूको उपयोग गर्नुहुन्छ भने के अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। Semalt ले यसको वेबसाइटमा दर्जनौं केस स्टडीहरू प्रस्तुत गर्दछ, तपाईंलाई तिनीहरूको दुबै काम र उनीहरूको नतीजाहरूको झलक दिँदै।
एक एजेन्सीको वैधता जाँच गर्न एक सरल तरीका छ: अनलाइन जम्प र विश्वव्यापी वेब के भन्न छ हेर्नुहोस्। इन्टरनेट द्वारा प्रदान गरिएको जानकारी स्वतन्त्रताको लागि धन्यवाद, अब कम्पनीले उनीहरूले सर्टकट लिइरहेका छन् वा प्रतिज्ञाहरू दिइरहेका छैनन् भन्ने तथ्यलाई लुकाउन अब असम्भव छ।
एजेन्सीको गुगल र फेसबुक समीक्षा जाँच गर्नुहोस्। यदि, Semalt जस्तै, तिनीहरूसँग Google समीक्षा स्कोर 4.5. / / and र फेसबुक समीक्षा स्कोर 9.9 /5(१ 170०,००० अनुयायीहरूसँग) भने , तपाईं विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ तिनीहरू उत्तम विकल्प हुन्। Semalt ले यसको साइटमा सयौं लिखित र भिडियो प्रशंसापत्रहरू पनि प्रदान गर्दछ, जसले सम्भावित ग्राहकहरूलाई कम्पनीले के गर्न चाहेको हो भनेर ठ्याक्कै के प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
व्यक्तित्व को एक बिट
एक साधारण कुरा जुन बाकीबाट सबै भन्दा राम्रो एजेन्सीहरू अलग गर्न मद्दत गर्न सक्छ रिलेटेबिलिटि हो। तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि तपाईं वास्तविक व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई बुझ्दछन्, र जो आदर्शसँग काम गर्न मजा हुनेछ। यदि एजेन्सीले यसको रमाईलो पक्ष देखाउँदछ, त्यो उत्तम संकेत हो।
Semalt's अफिस मस्कटमा लिनुहोस्, उदाहरणको रूपमा टर्बो टर्टल। २०१ the मा नयाँ कार्यालयमा सर्दा उहाँ Semalt टोलीको सदस्य बन्नुभयो, जहाँ अघिल्लो भाडावालाले उनलाई छोडेका थिए। अब ऊ एक विशाल एक्वैरियममा जीवनको आनन्द लिन्छ, र वेबसाइटमा आफ्नै कर्मचारी प्रोफाइल (उनी एक भर्ती अन्तर्वार्ताकार हो) पनि छ!
सबैमा, Semalt पूर्ण स्ट्याक एसईओ र मार्केटिंग एजेन्सीमा के खोज्नु पर्छ को सही खाका प्रदान गर्दछ। यसले नवीन सेवाहरूको पूर्ण सूट प्रदान गर्दछ, राम्रोसँग समीक्षा गरिएको छ, एक प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड छ, र यी सबै सुविधाहरू एक उत्कृष्ट मूल्यमा प्रदान गर्दछ।
यसबाहेक, पृथ्वीमा लगभग सबै देशहरूमा कम्पनीहरूसँग काम गरिसकेपछि, तपाईं विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि Semalt तपाईंको मातृभाषा बोल्छ! Semalt टोली अ English्ग्रेजी, फ्रान्सेली, इटालियन, टर्की, यूक्रेनी, रूसी र अन्य धेरै भाषाहरूमा धाराप्रवाह छ।
त्यसोभए, यदि तपाईं एजेन्सी खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसायलाई जहाँ जान आवश्यक छ त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्न सक्छ, किन Semalt छनौट नगर्नुहोस्?